TAOM-BAOVAO MALAGASY: Tapa-bolana alohan’ny paka
ACTUALITE/ CULTURE/ Evenement
Lynda ANDRIATSITONTA Mbola Tina Ramamonjisoa	0 Commentaire fév 20, 2018
Tapa-bolana alohan’ny fetin’ny paka no hankalazaina ny taom-baovao Malagasy. Amin’ity taona 2018 ity, ny 18 Martsa ny andro fankalazana ho an’ny mpikarakara ny taom-baovao Malagasy tsy manavaka finoana na fihaviana. Hita ao anatin’io vondron’olona mikarakara io fety ny Mpitana ny hasin’ny rova Andriambahoaka afovoan-tany, Mbola Tina Ramamonjisoa. Nambarany fa tsy tokony iadian-kevitra ny taom-baovao Malagasy. Araky ny fanandroana, ny 17 ny volana martsa no tsinana ny volana. Amin’io andro io no hanaovana ny “afotsimaty”. Amin’ny maha fetin’ny faran’ny taona azy, hisy ny filalaovana arendrina. Andro iray na ora alohan’io anefa dia tokony hifamela heloka ireo manana disadisa.
“Fotoana famitra-pihavanana ny taom-baovao Malagasy”. Rehefa migadona ny taona vaovao, mitso-drano ny zanaka ny ray aman-dreny. Arahina vary tondrahan-dronona tondrahan-tantely izany. Amin’ny maha androm-piravoravoana ny taom-baovao Malagasy, mifanolotra salohim-bary ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Faranana amin’ny fizarana nofon-kena mitam-pihavanana ny fety.
‹ ÉRADICATION POLIOMYÉLITE: La pérennisation de la vaccination	› FEDERATION MALAGASY DE TENNIS : un tournoi inédit se tiendra à Antananarivo